Isipho esingalindelekanga - HeraldLIVE
The Algoa Sun Isipho esingalindelekanga January 25, 2014
ISIKOLO samabanga aphantsi i-Zanoxolo ese-NU1 sizibone siwelwa ngumqa esandleni ngelixa sifumana isipho semali kwibanki u-Absa.
Sithe xasi bhiyozela usuku lwezithethe, amasiko nenkcubeko, salizwa ngemali ephuma ku-Absa emalunga ne-R7932.50.
Inqununu u-Thembeka Veto uvakalise imincili ngesisenzo sihle senziwe ngu-Absa.
“Apha esikolweni sinesitiya esasenza kwiminyaka emine eyadlulayo, sisenzela abantwana abahlelekileyo, abangenabazali nabangathathi ntweni.
U-Veto uthe: “U-Absa usinike lemali wasipha nezinto zokutyala, imbewu kunye netanki zamanzi zokunkcenkceshela, kwaye ndiziva ndonwabe kakhulu.”
Lemini ayiphelelanga nje apho kuphela, i-Zanoxolo iye yalima izitiya ezingezinye, incediswa ngabasebenzi baka-Absa.
“Eziziqhamo zikwesisitiya ziye zibeluncedo kubantwana esibaphekelayo,”utshilo u-Veto.
When husbands are abusive